Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → juillet → 27 → Morarano-Gara : Olona roa nodorana velona teo imasom-bahoaka
Ny alarobia teo ny mponina tao amin’ny kaominina ambanivohitra Fierenana no nahasambotra ireo olona roa; izay voarohirohy ho mpandroba. Nentina tamin’ny toerana malalaka aloha ireo olona mba ho hitan’ny besinimaro. Teo dia nanomboka tamin’izay ny fitsaram-bahoaka. Nofatorana aloha ny tànan’ireo roa lahy. Notsipazana lasantsy amin’izay ary dia nodorana tsy nananana antra nony avy teo. Izany habibiana izany dia nojeren’ny besinimaro, toy ny mijery sarimihetsika fotsiny. Vita izay dia lasa indray ireo olona nihaza ny naman’ireo efa maty. Nahatratra telo izy ireo ary ireo koa dia voarohirohy amin’ny raharaha hala-botry sy fandrobana; izay nisesisesy tao an-tanàna. Mba nanam-bitana ireo vosambotra, satria tonga ny mpitandro ny filaminana sy ny manampahefana ary nandrara ny olona tsy hanao fitsaram-bahoaka. Ankehitriny, dia mandeha hatrany ny atrik’asa etsy sy eroa ary samy mahatsapa ao anatin’izany, fa tsy mety ny fitsaram-bahoaka ary koa mila hentanina ny olona tsy hanao izany. Dia mijanona hatreo ny adihevitra, fa tsy tonga any amin’ny vahaolana ifotony. Ny an’ny olona dia tsotra ihany no tadiaviny, arovana ny ainy sy ny havany ary koa ny fananany. Rehefa mizotra amin’izany ny ezaka ary azo tsapain-tànana, dia mijanona ho azy ny fandraisan’ny vahoaka andraikitra hoazy samy irery. Fantatra mazava, fa tsy mety ny fitsaram-bahoaka ary tsy mifanaraka amin’ny fiarovana ny zon’olombelona. Saingy tsy vitan’ny fiofanana sy atrik’asa ny ady amin’izany.
harter 27 juillet 2018 at 12 h 55 min · Edit
Mampalahelo ! tsy voasazy arakiny izy reo mpanao ratsy ary mitombo isanandro,alina.Ny fanjakana tsy mandray andraikitra de rariny ny fitsarambahoka.Tsara ho fantatra reo mpanao ratsy fa ny famonona ihany no vahaolana. Tsara fantarina fa mbola maro reo firenena mampiatra ny peine de mort.
Tsinjo 27 juillet 2018 at 9 h 27 min · Edit
Tsy resaka hoe tsy arovana izy ireo no mahatonga ny fitsaram-bahoaka fa ny fisian’ny olona lian-dra ka mitady antony farany izay madinika hamonoana olona hatrany. Ny tsy fanasaziana ireo manao izany na dia efa azo sary mivantana aza dia mahatonga ny hafa mba hanandrana koa.